श्री ५ बन्ने रहर « News of Nepal
भनाइ नै छ– ‘व्यक्ति आफूले गल्ती गर्या छ भने आफ्नै छायाँदेखि पनि तर्सिन्छ। कसैले पछ्याइरहेछ, लखेटी रहेछ भन्दै दौडिन्छ। केले पछ्याएको हो, केले लखेट्या हो, छुट्याउन भ्याउँदैन अनि भागिरहन्छ, त्यो पनि एकपटक होइन, पटक–पटक
अहिले पीएम ओली र उनकै दौंतरी प्रचण्डलाई त्यस्तै भॉछ। ‘राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा फर्किदैन, फर्कन परिकल्पना पनि नगरे हुन्छ’ –ओलीले आइतबार संसद्मा यस्तै बोले। केही दिनअघि प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रम भने– ‘धेरै बकबक गरे ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीबाट निकालिन्छ।’
हरेक साता यस्तै तर्क आइरहेछ। पार्टी र सत्ता हाँक्ने पाइलट आफैं कन्फिडेन्ट न’भा हो कि, पाइलटको सर्टिफिकेट नक्कली पर्या हो बुझ्नै गाह्रो छ भन्या। यी दुई नेता मात्रै होइन, अन्य नेता पनि बेलामौकामा यसरी नै बर्बराउँछन्। दुई तिहाइ बहुमतवाला नेताहरुको तर्क सुन्दा लाग्छ– ‘राजतन्त्र चीर निद्रामा छ, जुनसुकै बेला बौरिन्छ। शीतल निवास, बालुवाटार, सिंहदरबार र अन्य अनेक दरबारमाथि नारायणहिटीले सोझै अड्डा जमाउँछ।’
मुलुकबाट राजतन्त्र हट्या डेढ दशक भइसक्यो त्यही पनि राजतन्त्रको छायाले लखेटिरहनुपर्ने किन ? कि, राजतन्त्रको हौवा पिटाएर श्री ५ ओली र श्री ५ प्रचण्ड लेख्ने रहर तीव्र भा हो ? दुई तिहाइवाला सरकारले केही लछारेन भनेर तीव्र आलोचना भइराख्याबेला आफ्नै गल्ती ढाकछोप गर्ने उपाय रचिएको हो भन्ने धरहराले बुझ्या छ।